I-Holland | Iimpawu zokugweba nokufa | Izixhobo zeZixhobo
I-Holland inikezela ngeendlela ezahlukeneyo zetafile yokucinezela. Skrolela ezantsi ukuze ubone iinketho ezahlukeneyo zokuhamba kunye neseti yokusebenzisa izixhobo.
Ungcoliseko lwegranule ngexesha lenkqubo yethebhulethi inokubangela iingxaki kwiindleko zokwenza imveliso. Iipleyiti zePunch kunye neeNdebe zeDrip zinceda ukunqanda ungcoliseko lwethebhulethi kunye nokukhonkwane ngexesha lenkqubo yokucinezelwa kwethebhulethi. Zonke ii-silicone Bellows kunye neekomityi zeDrop ezinikezwe yi-I Holland zihambelana ne-100% ye-FDA.
Ukongeza kwiintsimbi zethu ezisemgangathweni kunye neekomityi zedriphu, i-Holland ngoku sele iphuhlise uluhlu olwaziwa ngezixhobo zokuchonga isinyithi.
Imfutho kunye neNdebe yeNdebe: Landa i PDF
IGroove yeTyhila yeliHlabathi
Indawo yokutywina esemgangathweni yesiqhelo ivumela ukubekwa kweekomityi zedriphu kwiipunch.
I Hollands iyonke i-Universal Seal Groove ibonelela zonke izibonelelo zokugcina uphawu oluqhelekileyo lomgangatho kunye nokukhethwa kweentsimbi ezifanelekileyo.
Zombini zithintela ungcoliseko lwegranule.
IGroove yeSityu seHlabathi: Landa i PDF
Ukujikeleza izixhobo zentloko kuvumela intloko ukuba ijikeleze ngokuzimeleyo kumzimba wenqindi, ukubonelela 'ngokuthwala' phakathi kwentloko yenqindi kunye neenkampu.
Bukela ividiyo yethu ngasekhohlo yoyilo.
Isixhobo sokulungelelanisa die die sisetyenziswa ngokudibeneyo kunye neepuzzle ezininzi ezitshixileyo kunye nezidwetshiweyo. Ukulungelelanisa i-die bores ehambelana neendlela eziphambili kwizikhokelo ze-turret ukuvumela konke ukufa kufanelwe ngokukhawuleza nangokuchanekileyo ngaphandle komonakalo wepunki ephezulu.
Hlamba kwindawo ye-Keys (WIP)
Yilwe ngezisombululo ze-Wash in Indawo (WIP) engqondweni, eli qhosha lidityanisiweyo limelana kakhulu ne-corrosion. Xa udibene ne-PharmaGrade efanelekileyo® Isinyithi, esi sisixhobo esifanelekileyo soomatshini bokushicilela be-WIP.